Ko Kana Ndisiri Kukwana Pane Vamwe? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ko Kana Ndisiri Kukwana Pane Vamwe?
“Unotofanira kukwana-kwana pane vamwe, nekuti ukasadaro unoshaya shamwari, haufi wakaziva chinonzi upenyu, uye ramangwana rako rinenge risina kujeka. Hapana munhu anenge achimbokufungawo kuti uripo, uye unenge uchigara ungori wega.”—Carl
Unogona kufunga kuti zvataurwa pamusoro apa zvazonyanya. Asi chokwadi ndechekuti kune vanhu vanogona kutoita chero chii zvacho kuti zvataurwa naCarl zvisaitike kwavari. Ndizvo zvawaizoitawo here? Nyaya ino ichakubatsira kuwana imwe nzira iri nani yekutsvaga nayo shamwari.
Nei vanhu vachiedza kukwanawo pane vamwe?
Nekuti havadi kusaririra. “Pasocial media ndakaona mapikicha echikwata chevanhu vakaenda kunofara vachindisiya. Zvakaita kuti ndinetseke kuti ko ini ndakamboita sei chaizvo, uye ndakavhiringidzika zvekuti pfungwa dzekuti vanga vasingandifariri ndidzo dzega dzanga dzangozara mumusoro.”—Natalie.
ZVEKUFUNGA NEZVAZVO: Wakambonetseka here kuti vamwe vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu vachikusiya? Zvii zvawakaita kuti ukwanewo muchikwata chavo?
Nekuti havadi kuita sevakasiyana nevamwe. “Vabereki vangu havadi kuti ndive nefoni. Vamwe vana pavanondikumbira nhamba dzangu ini ndovaudza kuti handina foni, vanoti: ‘Wati chii? Une makore mangani?’ Pandinovaudza kuti 13, vanonditarisa kunge munhu anonzwisa tsitsi.”—Mary.
ZVEKUFUNGA NEZVAZVO: Zvii zvaunorambidzwa nevabereki vako zvingangoita kuti uzvione sewakasiyana nevamwe? Paunorambidzwa zvinhu izvi, unoita sei?
Nekuti havadi kudheererwa. “Vana vekuchikoro havafariri vanhu vanoita, vanotaura kana vanonamata zvakasiyana nevamwe. Kana usingaiti zvinoitwa nevamwe, vakawanda vanoda kukushungurudza.”—Olivia.
ZVEKUFUNGA NEZVAZVO: Wakambobatwa zvisina kunaka here nekuti hauna kuita zvaiitwa nevamwe? Zvii zvawakaita?
Nekuti havadi kusiyiwa neshamwari dzavo. “Ndaiedza kuita zvaiitwa nechero vandainge ndiinavo. Ndaisataura sematauriro andinoita mazuva ese. Ndaiseka zvinhu zvisingasekesi. Vamwe vana pavaiseka munhu, ndaitomusekawo asi ndichiziva zvangu kuti airwadziwa nazvo.”—Rachel.
ZVEKUFUNGA NEZVAZVO: Kufarirwa nevezera rako kunokosha zvakadii kwauri? Pane pawakambochinja here matauriro kana maitiro ako kuti mufanane?
Kukopa vamwe kuti ungokwanawo pavari kunogona kuita kuti vasakufarire. Nei? Nekuti vanhu vanowanzozviona kana munhu achinyepedzera. “Pandainyepedzera kuva zvandisiri, ndaibva ndatowedzera kusafarirwa nevandaidzidza navo,” “Ndakadzidza kuti zvitori nani kuramba uri zvauri, nekuti kana ukanyepedzera vanhu vanozviona,” anodaro Brian, uyo ane makore 20.
MAONERO ARI NANI: Imbonyatsofunga kuti zvinhu zvinokosha kwauri ndezvipi. Bhaibheri rinoti: “Muve nechokwadi chekuti ndezvipi zvinokosha kupfuura zvimwe.” (VaFiripi 1:10) Saka zvibvunze kuti, ‘Chinokosha kupfuura chimwe ndechipi? Kukwana-kwana pavanhu vane tsika dzisina kunaka here, kana kuti kuramba ndiri zvandiri?’
“Kuedza kufanana nevamwe vanhu hakuna zvakunobatsira. Hakuiti kuti vanhu vawedzere kukufarira, uye hakuiti kuti uve munhu ari nani.”—James.
Kuda kukwana pane vamwe kunogona kukutadzisa kutaura zvaunofunga. Zvinogona kuita kuti uve munhu anongoda kufadza vanhu uchingoita chero zvinodiwa nevamwe. “Ndaimboita zvese zvese kuti ndingokwana mune chimwe chikwata pasinei nekuti zvaizosvibisa zita rangu. Izvi zvaiita kuti vamwe vaite zvavanoda neni. Ndaiva chidhori chavo,” anodaro mukomana anonzi Jeremy.
MAONERO ARI NANI: Ziva tsika dzinokosha kwauri worarama zvinoenderana nadzo pane kuita serwaivhi runochinja-chinja ruvara ruchizvifananidza nezvakarupoteredza. Pane chikonzero chakanaka nei Bhaibheri rakati: “Usaita chimwe chinhu nekungoti vamwe vese vari kuchiita.”—Eksodho 23:2, Holy Bible—Easy-to-Read Version.
“Ndakaedza kufarira zvese zvavaifarira zvakadai senziyo, mitambo, hembe, nekupoda kwavaiita . . . ndakaedza kuita saivo. Ndofunga vaizviona kuti ndainyepedzera. Ndofunga munhu wese akazviona, chero ini wacho. Ndakapedzisira ndisisina mufaro uye ndasurukirwa, uye ndakanga ndisisatozivi kuti ini wacho ndimbori ani. Ndakapedzisira ndisisazivi zvandinoda kana zvandinofunga. Ndakadzidza kuti haungafanani nemunhu wese uye haasi munhu wese achakufarira. Hazvirevi hazvo kuti unofanira kukanda mapfumo pasi panyaya yekutsvaga shamwari; ita mwoyo murefu uchiziva kuti zvinotora nguva kuva neshamwari uye kuva munhu mukuru.”—Melinda.
Kuda kukwana pane vamwe kunogona kukanganisa maitiro ako. Mumwe mukomana anonzi Chris akataura kuti ndizvo chaizvo zvakaitika kune imwe hama yake. Chris anoti: “Akatanga kuita zvinhu zvaaisamboita zvakadai sekushandisa madhiragi kuti angokwana pane vamwe. Zvakamupinda muropa, uye zvakapotsa zvakanganisa upenyu hwake.”
MAONERO ARI NANI: Tambira kure nevanhu vane matauriro kana maitiro anoratidza kuti vane tsika dzakaipa. Bhaibheri rinoti: “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera, asi uya anoshamwaridzana nemapenzi zvichamuipira.”—Zvirevo 13:20.
“Dzimwe nguva zvakanaka kuita zvaunogona kuti ukwanewo pane vamwe. Asi hautombofaniri kudaro kana zvichiita kuti uite zvinhu zvaunoziva kuti zvakaipa. Vanhu kwavo vanokufarira uri zvauri.”—Melanie.
Zano: Paunotsvaga shamwari itsva, usatarisa vaya vanofarira zvaunofarira chete. Tarisa vanhu vanokoshesa zvaunokoshesawo, kureva zvaunotenda panyaya yemanamatiro, tsika, nemitemo..
Dzimwe hembe hadzitombokufiti. Saka vamwe vanhu havaiti kuti urambe uine tsika dzakanaka
“Kana usiri kukwana pane chimwe chikwata, zvingava zvakanaka kumira wombofunga kuti nei. Inyaya here yekuti chikwata chacho hachirarami zvinoenderana nedzaunoti tsika dzakanaka? Kana iriyo nyaya yacho, itofara kuti hausi kukwana pavari.”—Emma.
“Pane kunetseka zvakanyanya kuti ukwanewo pane vamwe, zviri nani kutoshandisa zvako nguva nesimba rako pakuvandudza unhu hunokuita kuti uve munhu ari nani. Kana uchiitira vamwe zvakanaka, vaya vaunoda kuti vave shamwari dzako vachatamba newe.”—Noah.
“Nzira yandinoshandisa kuti ndikwane pane vamwe ndeyekuratidza kuti ndine hanya nevamwe uye kuedza kuziva zvavanofarira nemaonero avo pane zvimwe zvinhu. Pane kuti ndichinje zvandiri, ndinobvuma kuti vamwe vanewo maonero akasiyana neangu. Izvi zvakandibatsira kuva neshamwari dzemazera ese.”—Dominique.
Kudzokorora: Ko kana ndisiri kungokwanawo pane vamwe?
Chinokosha kupfuura chimwe ndechipi? Kukwana-kwana pavanhu vane tsika dzisina kunaka here, kana kuti kuramba ndiri zvandiri?
Iva neunhu hwako hwakanaka, uye usanyara nezvauri.
Usaita serwaivhi runochinja ruvara kuti rufanane nezvinhu zvakarupoteredza.
Tambira kure nevanhu vane matauriro kana maitiro anoratidza kuti vane tsika dzakaipa.
Kuedza kukwana pane vamwe dzimwe nguva kwakanaka, asi usambofa wakazviita kana zvichiita kuti uite zvinhu zvaunoziva kuti zvakaipa.
Ushamwari Vechidiki Vanobvunza Kuti Vari Kuyaruka
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ko Kana Ndisiri Kukwana Pane Vamwe?
ijwyp nyaya 91